Orinasa milina fitotoana vera - Mpanamboatra sy mpamatsy milina bevelina any Sina
Motera 12 italiana baolina itondra solosaina PLC solosaina
Ity milina fitaratra beveling ity dia mampiasa rafitra mpampita baolina. Izy io no tena marina ary mandroso ary miorina tsara. Ny fampiasana rehetra NSK vokarina any Japon. Ny mpampita ny lamosin'ity milina ity dia afaka mampiakatra / midina hiasa fitaratra hafa habe. Izy io dia fehezin'ny PLC, miaraka amin'ny rafitra miasa tontonana. zoro fisehoan'ny efijery, sakan'ny volony, hateviny ambany, mora ampiasaina izy io. Ny milina dia mampiasa spindle ABB, rafitra inverter hafainganam-pandeha. Izy io dia manana fahombiazana miasa sy avo lenta.
11 12 motera baolina mitondra fitaratra milina beveling PLC mpanara-maso
Ity masinina ity dia natao manokana hanamboarana bevel amin'ny vera kely (30x30mm) sy vera lehibe (3mx3m), afaka mamorona sisiny bevel 45 ihany koa izy.
Ny làlam-pifandraisana mialoha dia azo afindra miakatra sy midina arakaraka ny haben'ny fitaratra.
Ity milina ity dia mandray ny fifehezana PLC sy ny interface interface. Ny efijery dia afaka mampiseho ny hatevin'ny fitaratra, ny zoro, ny sakany ary ny haavon'ny lalana miverina.
Front sy aoriana Conveyors dia mampiasa conveyor mitondra baolina, ny fitaovana familiana dia mandroaka mivantana ny roller ny pad tsirairay.
Masinina beveling fitaratra moto 9, fanaraha-maso PLC & efijery mikasika
Ity milina ity dia ampiasaina amin'ny fanaovana bevel amin'ny vera sy ny fitaratra, miaraka amina kodiarana diamondra manodidina izay mitoto amin'ny sisiny ambany. Ity milina ity dia mandray ny fifehezana PLC sy ny interface interface. Ny sakany sy ny zoro dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny PLC tena marina. Ny kodiarana famolahana pneumatika dia mahatonga ny volo hamirapiratra ambany indrindra amin'ny rihana ambanin'ny tany sy ny endriny vita amin'ny vy vy mba hiantohana ny fitoniana sy ny fahamendrehana Conveyors dia mampiasa rafitra fandefasana rojom-borona izay misy pad-griping manohitra ny fikorontanana miaraka amin'ny taolana vy nohamafisina. Nifindra tamim-pilaminana ity fitaratra fiantohana ity. Ny fiasa miasa dia avo. Ny hafainganam-pandeha dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny mpandrindra hafainganana.
Masinina 9 beveling vera maotera ABB maotera mora vidy
Ity milina ity dia natao hamokarana sisin'ny volo, miaraka amina fikosoham-baravarankely. Ireo takelaka mpanelanelana dia mampiasa takelaka vy nohamafisina, izay tsaboina amin'ny fizotra manokana ary henjana be. Milamina be ny fandefasana vera. Ny spindles dia entin'ny motera ABB avo lenta. Ny hafainganam-pandeha dia azo ovaina amin'ny regulator tsy misy dingana. Ny hatevin'ny fitaratra sy ny hafainganam-pandeha dia aseho amin'ny famakiana nomerika. Ity milina ity dia asongadin'ny fahombiazana avo lenta sy ny fandidiana mora ary ny vidiny ambany.
Masinina maotera 10 beveling môtô ABB môtô PLC fanaraha-maso efijery
Ity milina ity dia natao ho an'ny fikolokoloana / famolavolana volo bevel, miaraka amin'ny fitotoana ambany.
Conveyors dia mampiasa rafitra fandefasana rojom-borona izay misy pad-griping fanoherana ny fikorontanana miaraka amin'ny taolana vy vita amin'ny vy. Nifindra tamim-pilaminana ity fitaratra fiantohana ity. Ny fiasa miasa dia avo.
Ny hafainganam-pandeha dia azo ovaina amin'ny mpandrindra tsy misy dingana, izay manolotra fifantenana haingam-pandeha isan-karazany.
Mora ampiasaina ity milina ity ary manana fiasa tsara.
Masinina 10 beveling vera maotera ABB motera ambany vidiny
Beveler fitaratra PLC maotera 11 malaza indrindra any Shina
Ity milina ity dia natao hamokarana sisin'ny volo, miaraka amina fikosoham-baravarankely. Ny masinina dia mandray ny fifehezana PLC sy ny interface interface. Ny angona rehetra dia mety ampidirina amin'ny alàlan'ny tontonana miasa. Ny mpampita dia mampiasa rafitra rojo matevina fohy. Ny fikosoham-bary dia entin'ny motera ABB avo lenta. Ity milina ity dia manana automatization avo lenta. Izy io dia asongadin'ny fahombiazana avo lenta sy ny marina, ny kalitao azo antoka, ny fandidiana mora ary ny akanjo ambany.